I-ADK esekwe kwi-ADK yokuQala ukuPhuculwa kweZibonelelo zePosi yoRhwebo ngeAJA 4K / UltraHD 12G-SDI Solutions | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » I-ADK esekwe kwi-ADK yoPhuculo loLuntu yokuPhucula iZiko lePosi yoRhwebo nge-AJA 4K / UltraHD 12G-SDI Solutions
I-ADK esekwe kwi-ADK yoPhuculo loLuntu yokuPhucula iZiko lePosi yoRhwebo nge-AJA 4K / UltraHD 12G-SDI Solutions
Ukunyusa ibango labathengi lokunyaniseka okuphezulu kwevidiyo kunye nomxholo womsindo kuphakamisa ibha yentengiso yentengiso. Ngelixa ulwakhiwo lwe-3G-SDI lolwakhiwo lwanele HD imveliso kunye nokuhanjiswa, amaziko eposi yorhwebo afana neTokyo-based UBUNGCALI BOMDLALO bafuna i-4K / yamva njeUltraHD kunye nezisombululo ze-12G-SDI ekuhambeni kobungqina bokuhamba kwexesha kunye nenqanaba lokusingatha umxholo womda we-bandwidth ophezulu. I-ATELIER ARTE, ingalo emva kwemveliso yomboneleli weenkonzo zentengiso zaseJapan I-ADK yoyiloKutshanje kudityanisiwe neqabane lobuchwephesha iVisual Graphics Inc. (VGI) ukulungisa izinto ezikhoyo emva kwemveliso ngenkqubo entsha neyomeleleyo ekwaziyo ukuphatha i4K kunye HD umxholo ngaxeshanye ngentambo enye ye-12G-SDI yothutho.
Asikaze sibe nezixhobo ezihambelana ne-4K kumagumbi ethu okuhlela ngaphambili, kuba iipesenti ezingama-70 zeeprojekthi zethu zizentengiso zikamabonakude HD usasazo, utshilo uTakeshi Yamamoto, uMhleli, ATELIER ARTE. "Isigqibo sethu sokwakha i-4K / hybridHD Indawo yemveliso izikhundla ezingcono kwisitudiyo sethu sokubhida kunye nokwamkela izibonelelo kwiziphelo eziphezulu ze-4K kunye neeprojekthi ze-HDR kwixesha elizayo.
Phambi kokuba kugqitywe ngaphezulu, iqela lixhomekeke kuhambo oluphambili lwe-3G-SDI HD umxholo. I-VGI yabhaliswa njengeqabane lobuchwephesha kunye neenkqubo zokudibanisa ukuphuhlisa kunye nokufaka inkqubo yale mihla eyayilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno zobume beziko kunye nezixhobo zokuyila ezisetyenziswa ngabasebenzi basemva kwemveliso. Imfuno ebalulekileyo xa kuyilwa inkqubo ehlaziyiweyo yayihambelana nayo Autodesk Idangatye, esinye sezixhobo eziphambili ze studio sokudibanisa, ukuhlela, ukulungisa umbala kunye nokugqiba.
Indawo yokuphucula i-ATELIER ARTE yaqala ngo-2020, inezisombululo ezininzi ze-AJA 12G-SDI zokwenza lula ukuhambisa, ukuguqula kunye nokuhambisa imiqondiso ephezulu ye-bandwidth 4K. Isentloko ekusebenzeni yi-AJA's KUMO 1616-12G compact router, ethi igunyazise ukuhambisa kunye nokusasaza imiqondiso yegalelo ye-12G-SDI kwiindawo ezininzi zokuphuma kufutshane nesitudiyo. I-KUMO 1616-12G yenza ukuba abahleli basebenzise imiqondiso ye-12G-SDI ngokuchanekileyo, ngolawulo olulula kuzo zombini i-4K kunye HD Imithombo yevidiyo usebenzisa iqhosha elinye okanye ngokusebenzisa i-UI yesikhangeli sewebhu. Indawo nganye yokuhlela yesithathu yeFlamme Premium inee-AJA KONA 5 PCIe I / O khadi, exhasa ukuthembeka okuphezulu kwe-HDR, HFR kunye ne4K /UltraHD umxholo nge-12G-SDI. I-KONA 5 ihambisa iziphumo zeLangatye kumbindi we-KUMO 1616-12G umzila.
Ukuguqulwa kwemiqondiso nokwandisa imiqondiso ye-12G-SDI ngaphezulu kwefayibha, i-ADK yoyilo enye ibandakanye uluhlu lweAJA's ezomeleleyo neziphathekayo Mini-Converters kwiziseko zophuculo. Iiguquli zeAJA Hi5-12G zongezwa kwigumbi ngalinye lokuhlela lokuguqula imiqondiso eyi-12G-SDI HDMI, ukwenzela ukubonisa iiprojekthi kwii-4K ze-HDR zokujonga kunye nokujonga kwangaphambili kwabaxhasi. Isibini seAJA FiDO-T-12G kunye neziguqululi ezimbini ze-FiDO-R-12G zafakelwa ukuhambisa imiqondiso ye-12G-SDI ngefayibha, esetyenziselwa ukwaba imiqondiso kwimigama emide phakathi kwamagumbi okuhlela nakwisalathiso se-EIZO ColourEdge esetyenziselwa iinjongo zokuphononongwa.
"I-AJA gear inegama elihle kakhulu lokuthembeka, kwaye kwimeko yokungaphumeleli, i-AJA inikezela ngeenkonzo zokulungisa ngokupheleleyo ukuqinisekisa ixesha eliphantsi lokugcina imisebenzi yethu izinzile kwaye iqhuba," utshilo uKosuke Yamada, Umphathi weDatha, u-ATELIER ARTE.
Izixhobo eziphuculweyo ze-ATELIER ARTE zenza abahleli ukuba batshintshe ngaphandle komthungo phakathi kokusebenza nge4K kunye HD umxholo, ukwandisa imveliso ngokubanzi kunye nokususa ukuhamba kweebhotile ekuhlangatyezwane nazo nenkqubo yangaphambili. Ngokuthembeka kunye nokuzinza kwemveliso ye-AJA-eqinisekisiweyo yomgaqo wee-routers, izixhobo ze-I / O kunye nabaguquli, i-ATELIER ARTE ixhotyiswe ngokupheleleyo ukuphatha ezona projekthi zorhwebo zifunwayo.
Ngolwazi oluthe kratya kwizisombululo ze-AJA's 12G-SDI, ndwendwela: www.aja.com/solutions/12g
Ukususela kwi-1993, i-AJA Video ibe ngumqhubi okhokelayo wekhompyutheni zekhompyutheni zevidiyo, abaguquleli, izisombululo zevidiyo zokurekhoda kunye neekhamera zengcali, ukuzisa iimveliso eziphezulu, iimveliso ezibizileyo kwiimarike zengcali, zokusasaza nezokuvelisa. Iimveliso ze-AJA zenziwe kwaye zenziwe kwiindawo zethu kwiGrass Valley, eCalifornia, kwaye zathengiswa ngetrakethi enkulu yokuthengisa abathengisi kunye neenkqubo zokuhlanganisana emhlabeni jikelele. Ngolwazi olungakumbi, nceda ubone iwebhusayithi yethu www.aja.com.
I-ADK esekwe kwi-ADK yoPhuculo loLuntu yokuPhucula iZiko lePosi yoRhwebo nge-AJA 4K / UltraHD 12G-SDI Solutions - Februwari 18, 2021
I-AJA ikhupha izisombululo ezimbini ezitsha ze-12G-SDI ezivulekileyo zeGear® - Januwari 13, 2021
I-Photron's TFX-Artist isebenzisa iAJA KONA 5 ukuya kwi-Power 4K / UltraHD Telop yoSasazo lwaseJapan - Disemba 21, 2020
Previous: Amathuba okuchongwa kwi-HPA Tech Retreat Supersession
next: IComprimato JPEG2000 codec edityanisiweyo kwiQonga leNkqubo yeQonga leFayile yeQC